जन्मियो हरियो रङ्गको कुकुर : जसको जन्म दुर्लभ मानिन्छ। – Ujyaalo Patrika
जन्मियो हरियो रङ्गको कुकुर : जसको जन्म दुर्लभ मानिन्छ।
अनौठो रङ्गको कुकुर जन्मिएको छ। क्रिस्टियन मालोस्सी नाम गरेका कुकुर पालक कृषकको फार्ममा हरियो छाउरा जन्मिएको हो। बीबीसीका अनुसार सार्डिनिया टापुमा जन्मिएको आश्चर्य चकित पार्ने सो छाउराको नाम पिस्टाचियो राखिएको छ।
स्पेलाच्चियो नाम गरेकी पोथी कुकुरले पाँच वटा बच्चा पाएकी थिइन्। अन्य छाउराछाउरीको भने माउको जस्तै सेतो रङ रहेको छ। हरियो रौँ भएको कुकुरको जन्म दुर्लभ मानिन्छ। गर्भमा हुँदा बिलिभर्डिन नामक हरियो रङ्गका कारण उसको रौँ हरियो भएको ठानिएको छ।
तर बिस्तारै पिस्टाचियोको रङ्ग उड्न थालिसकेको र यो क्रम कायम रहने बताइएको छ। मालोस्सीले पिस्टाचियो आफूले पाल्ने तर अरू छाउरा अरू मानिसलाई पाल्न दिने निर्णय गरेका छन्। हुर्केपछि पिस्टाचियोलाई भेडीगोठमा प्रयोग गर्ने उनको विचार छ।
Previous भूत-प्रेत : हुन्छ कि हुदैन जान्नुहोस . . .
Next कुकुरले पिसाब फेर्दा एउटा खुट्टा किन उचाल्छ ? दुनियाँ चकित हुने यस्तो छ रहस्य !